Nezvedu | China Yunke China Ruzivo Technology Limited
Nezve Dhijitari China (Parent kambani) Boka
Dhijitari China (Parent kambani) Boka Co, Ltd. (kodhi yemasheya: 000034.SZ).
Makore makumi maviri apfuura atipupurira isu tichitungamira mumabasa akabatanidzwa muChina. Iine eco-system inovhara vanopfuura makumi matatu evakabatana, isu takapa mamirioni emabhizinesi uye mazana emamirioni evatengi vane IT zvigadzirwa, mhinduro uye masevhisi.
Munguva ye "gore + hombe dhata", isu tichagara takavimbika kune yedu basa, kuvaka pamusoro pekumhanyisa uye kuyedza kuve inotungamira yegore sevhisi mupi uye anogonesa bhizinesi shanduko.
Nezve Dhijitari China Boka (Kambani yemubereki)
Yunke China Information Technology Limited (Pakutanga zita seDIGITAL CHINA (Kambani yemubereki) NETWORKS LIMITED, DCN kwenguva pfupi), semubatsiri weDigital China (Kambani yeVabereki) Boka (Kodhi yemasheya: SZ000034), inotungamira data yekutaurirana michina uye mhinduro mupi. Kutora kubva kuLenovo, DCN yakavhurwa mumusika wenetiweki mu1997 nefilosofi yekambani ye "Vatengi-vanotungamira, Inotungamirwa neTekinoroji uye Sevhisi-inofarira".
DCN inotarisa padanho rekutaurirana reneti ine yakazara zvigadzirwa mitsara, inosanganisira switchch, Wireless, Router, Security, uye Cloud services. Nekuenderera mberi kuisa mari paRD, DCN ndiyo inotungamira IPv6 solution mupiki, yekutanga Chinese kambani yakahwina IPv6 Yakagadzirira Chitupa cheGoridhe uye wekutanga mugadziri akahwina OpenFlow v1.3 Chitupa.
DCN yatove nekupa zvigadzirwa nemhinduro kumatunhu ese eChina uye nyika dzinopfuura makumi mashanu pasirese, yakagadziriswa yekutengesa uye nzvimbo yebasa kuEurope, America, Russia, CIS, Southeast Asia uye Middle East matunhu. DCN inoshandira vatengi zvinobudirira kubva kuDzidzo, Hurumende, Vashandisi, ISP, Mauto, uye Enterprises.